डिसेम्बर 1, 2021 | लेटरप्रेस, कागज, प्रिन्ट डिजाइन
छवि क्रेडिट: steelpetalpress.com
दशकौंदेखि लेटरप्रेस छाप्ने चलन छ। यो छाप्ने शैली हो जसमा कागज, कपडा, वा कुनै अन्य सामग्रीको पानामा छाप सिर्जना गर्न उठाइएको प्रकार प्रयोग गरिन्छ।
यसले बाक्लो र पातलो बनावट भएको पाठको प्रभाव दिन्छ जसले यसको डिजाइनमा गहिराइ थप्छ साथै पढ्न सजिलो हुन्छ किनभने अक्षरहरू सतहमा इम्बोस्ड देखिन्छन्, यसले आधुनिक टाइपोग्राफीको तुलनामा थप केही दिन्छ। Letterpress मुख्य रूपमा निमन्त्रणाहरू, घोषणाहरू, पोस्टरहरू, र उद्धरणहरू वा कविताहरू जस्ता चीजहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
पत्रपत्रिका के हो?
छवि क्रेडिट: lifestylecrafts.com
सबै भन्दा पहिले, तपाईलाई थाहा छ कि सबै कुरा लेटरप्रेस प्रिन्टिङको लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन किनभने यो प्रविधिले धेरै विशिष्ट प्रकारका सामग्रीहरूसँग मात्र काम गर्दछ। तपाईलाई एक निश्चित मोटाई र थोरै लोच पनि चाहिन्छ, जसले पत्रबाट कार्डको बाँकी भागमा वा तपाईले प्रयोग गरिरहनुभएको जुनसुकै दबाबलाई स्थानान्तरण गर्न सजिलो बनाउँदछ।
तपाइँको मसी सफलतापूर्वक शीर्षमा टाँसिएको छ र कुनै समस्या बिना त्यहाँ रहन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न यी कागजातहरूमा कुनै प्रकारको कोटिंग स्थापना गरिएको हुनुपर्दछ भनेर उल्लेख नगर्नुहोस्। त्यहाँ यस्ता उत्पादनहरू उत्पादन गर्ने धेरै कम्पनीहरू छन्, तर सामान्यतया, सबैभन्दा लोकप्रियहरू म्याग्नानी हुन्, Gmundर रिभ्स। तिनीहरूसँग विभिन्न प्रकारका विकल्पहरू उपलब्ध छन्, र तपाईंले तिनीहरूमा के खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दै, तपाईंले आफ्नो आवश्यकताहरू अनुरूप छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
लेटरप्रेस प्रिन्टिङका ​​लागि उत्तम कागजातहरू के हुन्?
लेटरप्रेस प्रिन्टिङका ​​लागि उत्तम कागज छनोट गर्नु आफैमा एउटा कला हो। यो किनभने तपाईले धेरै कारकहरू विचार गर्नुपर्दछ जस्तै मोटाई, स्थायित्व, र तपाईले आफ्नो परियोजनाको लागि प्रयोग गर्ने मसीको प्रकार पनि। त्यहाँ पत्रपत्रिकाका केही फरक वर्गहरू छन्:
काठको पल्प: यी प्रकारका कागजहरू काठको पल्पबाट बनेका हुन्छन् जसले यसलाई धेरै प्राकृतिक रूप र अनुभूति दिन्छ जबकि धेरै भारी र बाक्लो पनि हुन्छ। यो धेरै धेरै स्टेशनरी र राम्रो कला बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो सामग्री मानिन्छ, त्यसैले यदि तपाइँ यस प्रकारको कागजको साथ केहि छाप्नुहुन्छ भने, यो निश्चित रूपमा भीडमा खडा हुनेछ। साथै, यो सामान साँच्चै सधैंभरि रहन्छ, विशेष गरी जब पोलिमर कोटिंगले ढाकिएको हुन्छ।
कपास कागज: यो मूलतया लुगदीको रूपमा एउटै कुरा हो, बाहेक यो पूर्ण रूपमा कपासबाट बनाइएको हो। प्रत्येक पानामा कति कपास प्रयोग गरिन्छ भन्ने आधारमा यो विभिन्न मोटाईमा आउँछ। काठको पल्पमा कपासको कागजको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यो धेरै बलियो छ। र सबै भन्दा राम्रो भाग? कपास समयसँगै काठको पल्प जत्तिकै पहेँलो हुँदैन।
राल लेपित कागजहरू: यो लेटरप्रेस गरिएको सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने अर्को उत्कृष्ट तरिका हो जुन धेरै लामो समयसम्म रहन्छ। यसले राल प्रयोग गर्दछ जुन प्रायः उस्तै चीज हो जुन उनीहरूले प्लास्टिकका सामानहरू कफी कपहरू बनाउन प्रयोग गर्छन् त्यसैले यो एकै समयमा कडा, बलियो र वाटरप्रूफ हुन्छ।
लेटरप्रेस पेपरहरूको श्रेणी बाहेक, कागजको छनोट तपाईंको प्रिन्टलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू मध्ये एक हुनुपर्छ। एक सामान्य गल्ती जो यस प्रकारको काममा नयाँ छन् प्रायः मानक प्रतिलिपि कागज वा केवल कुनै अन्य प्रकारको सस्तो प्रिन्टर पेपर छनोट गर्ने हो जुन उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा पाउन सक्छन्। यसले दुईवटा समस्याहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ किनभने, एकातिर, तपाईंले उचित सामग्रीहरू फेला पार्ने चिन्ता नगरेर स्रोतहरू बर्बाद गरिरहनुभएको छ, अर्कोतर्फ, यदि तपाईं कम गुणस्तरका सामग्रीहरूमा केही छाप्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आशा गर्न सक्नुहुन्न। राम्रो हेर्न को लागी। प्रयोग गर्नका लागि राम्रो पत्रपत्रिकाका केही उदाहरणहरू समावेश छन्:
Crane's Lettra: यो लेटरप्रेस पेपरको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्पहरू मध्ये एक हो। यो धेरै टिकाउ छ, यसले वर्षौं पछि च्यात्दैन वा पहेँलो बनाउँदैन, र यदि तपाइँ यसलाई छाप्नको लागि रोलर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि, तपाइँले मसीको धुलोको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन किनभने यसमा एक विशेष कोटिंग छ जसले यसलाई रोक्न सक्छ। कागजमा मसी स्टिकलाई पूर्ण रूपमा बनाउने क्रममा भइरहेको छ। साथै, तपाइँ यसलाई कुनै पनि समस्या बिना बहुलकको साथ कभर गर्न सक्नुहुन्छ (तपाईले जे भए पनि गर्नुहुनेछ)।
Craneलेट्रा। क्रेडिट: सेना कागज
म्याग्नानी: यो एक इटालियन ब्रान्ड हो, त्यसैले यो पहिलो जस्तै लोकप्रिय छैन, तर अझै पनि, तपाइँ यसलाई केहि अनलाइन स्टोरहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूसँग विभिन्न प्रकारका कागजहरूको एक विशाल चयन छ जुन निश्चित रूपमा तपाईंको दिमागलाई उडाउनेछ किनभने यस सामग्रीको लागि मात्र 100 भन्दा बढी भिन्नताहरू छन्। तिनीहरूको मुख्य फाइदाहरू मध्ये एक हो कि तिनीहरू पानी-प्रतिरोधी पनि छन्, जसको मतलब यदि तपाईंले पोस्टरहरू जस्तै कुनै कोटिंग बिना छाप्न तिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने, तिनीहरूले भिजेको भए पनि तिनीहरूलाई केही हुने छैन।
रिभ्स: यदि तपाइँ केहि उत्कृष्ट र पुरानो विद्यालय चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि Rives तपाइँको लागि सही छनौट हुन सक्छ। यो एक फ्रान्सेली कम्पनी हो जुन धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन् जुन तपाइँ तपाइँको परियोजना को लागी वास्तव मा के चाहिन्छ मा निर्भर गर्दछ। तिनीहरूको कागजको धेरै राम्रो मोटाई, उत्कृष्ट बनावट छ, र यो त्यहाँको उत्कृष्ट कम्पनीहरू मध्ये एक भएकोले, तिनीहरूले यसलाई उच्च-गुणस्तरको मसीले पनि प्रिन्ट गर्छन्, त्यसैले तपाईंले कुनै पनि समस्या आउनु अघि तपाईंको प्रिन्टहरू धेरै वर्षसम्म टिक्ने आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
रिभ्स। छवि क्रेडिट: सेना कागज
लेटरप्रेस पेपर र अन्य प्रकारहरू बीच के भिन्नता छ?
आफ्नो कागज छनोट गर्दा, तपाईंले एक महत्त्वपूर्ण कुरा दिमागमा राख्नु पर्छ: वजन। तपाईं एकै समयमा पातलो र हल्का सम्पूर्ण प्रक्रिया छिटो र सजिलो हुनको लागि झुकाउन वा फोल्ड नगरी आफैंमा खडा हुन पर्याप्त भारी चाहनुहुन्छ।
साथै, लेटरप्रेस एक राहत प्रिन्टिङ प्रविधि भएकोले, तपाइँले तपाइँको कागज फ्ल्याट छ भनेर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ किनभने अन्यथा, तपाइँको प्रिन्ट विकृत देखिनेछ। तपाईंले कुनै पनि कुरा किन्नु अघि यसलाई जाँच गर्ने उत्तम तरिका भनेको सामग्रीको उल्लेखित तौल (जुन सधैं यसको विवरणमा उपस्थित हुनुपर्छ) हेरेर र त्यसपछि अन्य विकल्पहरूसँग तुलना गर्नु हो।
एउटा मानक प्रतिलिपि कागजमा लगभग 80 ग्राम प्रति वर्ग मिटर हुन्छ जसले यसलाई लेटरप्रेसको साथ प्रयोग गर्दा धेरै अस्थिर बनाउँछ।
Craneको Lettra मा 115 ग्राम छ जसले यसलाई थप मोटो बनाउँछ तर उत्कृष्ट नतिजाको लागि पर्याप्त स्थिर पनि बनाउँछ
म्याग्नानीमा लगभग 135-140 ग्राम हुन्छ।
Gmund अर्को उत्कृष्ट विकल्प हो जुन 90 ग्राम प्रति वर्ग मिटरमा आउँछ। यो पातलो, स्थिर छ (जसले यसलाई धेरै टिकाउ पनि बनाउँछ) र सबै भन्दा राम्रो मूल्य यो गुणस्तरको लागि धेरै कम छ।
Gmund। छवि क्रेडिट: IciPaper
लेटरप्रेस पेपरहरूको लागि किनमेल गर्दा कुन प्रश्नहरू सोध्ने
तपाईंले याद राख्नु पर्छ कि कागज त्यो प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो किनभने यो तपाईले छाप्नु हुनेछ, त्यसैले यदि त्यहाँ केहि गलत भयो भने, त्यसपछि तपाइँको सम्पूर्ण परियोजना अलग हुनेछ। तपाईले चाहानु भएको अन्तिम कुरा तपाईको लेटरप्रेस प्रिन्टिङ कुरूप हुन वा अझ नराम्रो, खराब सामग्रीको कारण बर्बाद हुनको लागि हो।
यसैले नयाँ आपूर्तिकर्ताको लागि किनमेल गर्दा, उनीहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको बारेमा सबै सोध्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईंले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा कुन छनौट गर्नुपर्छ। यदि तिनीहरू यस प्रश्नको जवाफ दिन इच्छुक छैनन् भने, केवल एक फरक प्रदायकमा जानुहोस् किनभने यसको मतलब तिनीहरूले गुणस्तरको बारेमा वास्ता गर्दैनन्। यहाँ दुईवटा उपयोगी प्रश्नहरू छन् जुन तपाईंले सोध्न चाहनुहुन्छ:
यो कस्तो प्रकारको कागज हो: तपाईले सोध्नु भएको पहिलो कुरा यो हुनुपर्छ। लेटरप्रेस कागजहरू किन्दा मूलतया तीनवटा प्रकारहरू उपलब्ध हुन्छन्: काठको पल्प, कपास र र्याग (जुन उच्चतम गुणस्तर हो)। तपाईं र्यागको लागि जान चाहन सक्नुहुन्छ किनभने यो 100% शुद्ध सामग्री हो जुन सधैंभरि रहन्छ, यदि तपाईंले यसलाई छाप्न रबर प्रयोग गर्नुभयो भने पनि। साथै, यदि तपाइँ अति उच्च गुणस्तरको केहि चाहनुहुन्छ भने, कपास पनि राम्रो विकल्प हुन सक्छ, तर ध्यान राख्नुहोस् कि यी दुई चीजहरू पानी प्रतिरोधी छैनन्, त्यसैले पोस्टरहरू छाप्न वा तिनीहरूसँग यस्तै अन्य चीजहरूबाट बच्न प्रयास गर्नुहोस्।
यसको वजन कति छ? माथि उल्लेख गरिए अनुसार, Letterpress लाई भारी सामग्री चाहिन्छ, जसको मतलब प्रति वर्ग मीटर कम्तिमा 90 ग्राम। यस प्रिन्टिङ प्रविधिसँग कम कुनै पनि कुराले राम्रोसँग काम गर्दैन त्यसैले यो दिमागमा राख्नुहोस्।
लेटरप्रेस पेपरको हेरचाह कसरी गर्ने?
तपाईले वास्तवमा केहि गर्न आवश्यक छैन किनकि यी सामान्य सामग्रीबाट बनाइएका छन्, तर तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि तिनीहरूमा विशेष कोटिंग छ जसले तिनीहरूलाई तरल पदार्थबाट जोगाउँछ, त्यसैले चिन्ता नगर्नुहोस् यदि तपाइँका प्रिन्टहरू भिजेका छन् वा केहि छिर्छ भने। तिनीहरूमा पानीले सबै चीज सफा गर्नुहोस्, र तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ। तिनीहरूमध्ये केहीले ब्लीच पनि गर्न सक्छन्, त्यसैले तिनीहरूमा धेरै तातो प्रयोग नगर्न सावधान रहनुहोस् किनभने तिनीहरूले समयसँगै केही पहेँलो दागहरू विकास गर्न थाल्छन्।
के मैले लेटरप्रेसको साथ सबै कुरा प्रिन्ट गर्नुपर्छ?
लेटरप्रेस मात्र प्रयोग गर्नु कुनै अर्थ छैन जब त्यहाँ अन्य विधिहरू छन् जसले समान परिणामहरू प्रदान गर्दछ तर कम काम समावेश गर्दछ। त्यसकारण यदि तपाइँ साँच्चै प्रक्रियामा सबै बाहिर जान चाहानुहुन्छ वा केहि विशेष गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्र यस प्रकारको प्रिन्टिङसँग टाँस्न सिफारिस गरिएको छ किनकि यदि तपाइँ यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, नियमित लेजर वा डिजिटल धेरै जसो केसहरूमा वास्तवमा अधिक व्यावहारिक हुन्छ।
यसले लामो समय लिन सक्छ, तर गुणस्तरलाई तपाइँको नियन्त्रण बाहिर कुनै पनि कुराले असर गर्ने छैन (जुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ)। साथै, तपाईंले पहिले नै कुनै पनि सामान सेटअप गर्ने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन, त्यसैले तपाईंले यस तरिकाले धेरै समय बचत गर्नुहुनेछ।
आज बजारमा धेरै पूर्व-निर्मित किटहरू छन् तर कहिलेकाहीँ, सबै तयार हुनु उत्तम विचार होइन। आदर्श रूपमा, लेटरप्रेस प्रिन्टरहरूलाई विशेष सामग्री चाहिन्छ किनभने हरेक सानो कुराले तपाईंको अन्तिम उत्पादन कस्तो देखिन्छ भन्नेमा ठूलो प्रभाव पार्छ। यदि तपाईं यो धेरै धेरै-मृत कलाको बारेमा थप जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् र यसको बारेमा केही सामग्रीहरू पढ्नुहोस्।
Eun Rockwell एक ब्लगर हो लेखक पुन: सुरु गर्नुहोस्, र युनाइटेड किंगडमका अकादमिक लेखक जो एक संग काम गर्दछ CV सम्पादन प्रदान गर्ने सेवा। उनी सँधै नयाँ विषयहरूको बारेमा लेख्न खोज्छिन् र नयाँ र कठिन लेखन विधाहरूमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न निरन्तर समर्पित छिन्। पुस्तक उनको मनपर्ने शौक मध्ये एक हो। तपाईंले ट्विटर मार्फत Eun लाई @rockwell_eun_ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
←7महत्वपूर्ण UX कौशल र तिनीहरूलाई कसरी विकास गर्ने
10 तरिकाहरू वेबसाइट रिडिजाइनले तपाईंको सानो व्यवसायलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ →